वडाको विकास नै मेरो मुल एजेण्डा होः उम्मेदवार अधिकारी | KTM Khabar
२०७४ बैशाख २४ गते २२:४६ मा प्रकाशित
काठमाडौँ । मुलुक यत्ति बेला चुनाबि महोलले केन्द्रित रहेको छ । पार्टीका उम्मेदवारहरु अहिले नगर, वडा–बासीहरुको घर दैलो कार्यक्रममा व्यस्त छन् । आफ्ना चुनाबी एजेण्डा सहित आफ्नो जित हुने विश्वासका साथ आफुलाई प्रस्तुत गरिरहेका छन् ।
नगरबासी तथा वडाबासीहरुका लागि पनि कुन उम्मेदवार छान्ने अथवा कसलाई भोट दिने ? भन्ने विषयमा केन्द्रित रहिरहेका छन् । विशेष रुपमा स्थानिय निकायको निर्वाचनलाई केन्द्रित गरेर केटिएम खबरले पनि विशेष सहभागीता मुलक कार्यक्रम तथा सम्वादहरुलाई जोड्दै आईरहेको छ ।
चुनावी रौनकतामा रहेका पार्टीका उम्मेदवारहरुलाई उम्मेदवारीको औचित्यका विषयमा उम्मेदवारी किन ?, हिजोका दिनहरुमा नगरबासीहरुलाई के दिनु भयो ?, अबको योजना के छ ?, नगरबासीले तपाईलाई किन भोट दिने ? भन्ने सवालमा केन्द्रित रहेर काठमाडौँका नगर उम्मेदवारहरुसंग विशेष भिडियो सम्वादलाई जोड्ने प्रयास गरिरहेका छौँ ।
यसै सन्दर्भमा काठमाडौँको उत्तरी भेगमा रहेको बुढानिलकण्ठ नगरपालिकाका नेकपा एमाले वडा नं. ११ का अध्यक्ष उम्मेदवार राजु अधिकारीसंग केटिएम खबरका लागि श्याम कार्कीले विशेष भिडियो सम्वाद गरेका छन् । प्रस्तुत छ सोही कुराकानीको सम्पादित अंशः
वडाबासीहरुको पहुँचमा पुग्न के कस्ता कार्यक्रमहरुलाई अगाडी बढाई रहनु भएको छ ?
बुढानिलकण्ठ नगरपालिका वडा नम्वर ११ लाई मैले विशेष गरी आफ्नो चुनाबी माहोल भन्दा पनि मैले नजिकबाट हेरेको छु । यस वडाको विकास निर्माणमा म नजिक छु । मैले गरेका कामहरु प्रति वडाबासी सन्तुष्ट हुनुहुन्छ । यो वडामा रहेर काम गर्दा, यस वडामा म पुग्दा उहाँहरुले मलाई देखाउँनु भएको सदासहायता प्रति मेरो शिरोधार्य मैले सम्झेको छु । म प्रति सहानुभुति देखाउँनु भएको छ । त्यसको लागि म आभार व्यक्त गर्दछु ।
वडाबासीको कस्तो प्रतिक्रिया पाईरहनु भएको छ ?, कस्तो महशुस गर्दै हुनुहुन्छ ?
म एकदम ढुक्क छु । म मेरा दाजु–भाई, दिदि–बहिनि, आमा–बुवा सबै जनाले मलाई चिन्नुहुन्छ र म पुग्दा खेरी तेरो प्रतिनिधित्वको आवश्यकता छ भन्ने सल्लाह, सुझाव दिनुहुन्छ । यसले गर्दा आफ्नो जीत शुनिश्चित भएको महशुस गरेको छु ।
आजका दिनसम्म वडाबासीहरुले राजु अधिकारीबाट के पाए ?
म बुढानिलकण्ठ नगरपालिकामा रहेर अहिले अनुगमन समितिमा रहेर विकास निर्माणका कामहरुलाई नजिकबाट हेरेको छु ।
कत्तिपय योजनाहरु मैले अनुगमनका क्रममा हेर्दा वडाबासीहरु पुर्ण रुपमा सन्तुष्ट नभएको, समस्याहरु जस्ताको तस्तै रहेको पाए । भोलीका दिनमा म आउँदा त्यी योजनाहरु पुरा गर्ने पक्षमा म लाग्नेछु र यस कुरामा वडाबासीले मलाई विश्वास गर्नुहुन्छ र विश्वस्त छु ।
यसै सन्दर्भमा हिजोको कपन गाविस हुँदा वडा नं. ४ को जनप्रतिनिधि पनि भएको कारणले र मैले गरेका काम, मेरो अनुभवले गर्दा खेरी मेरा प्रत्यासी भन्दा भिन्न विचारको भएको वडाबासीहरुबाट प्रतिक्रिया पाइरहेको छु ।
बुनपा एमाले वडा नं. ११ अध्यक्ष उम्मेदवार राजु अधिकारीसंगको थप कुराकानी तथा भिडियो कुराकानी हेर्नका लागि तलको युटुब लिंकमा जानुहोसः